प्रदेश ५ को ऐतिहासिक प्रदेशसभा वैठक आज, के के हुन्छ पहिलो बैठकमा ? - GBM
२०७४ माघ २१ gautam buddha sandesh	0 Comments
बुटवल, २१ माघ । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको पहिलो संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार संघीय नेपालको प्रदेश नंं ५ को प्रदेश सभा वैठक ( प्रदेश संसद) आज दिउँसो बुटवलमा बस्दैछ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट मुलुक संघात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेसंगै प्रदेश नंं. ५ को प्रदेशसभाको ऐतिहासिक पहिलो बैठक आज दिउँसो १ बजेबाट शुरु हुनेछ ।
प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलस्थित बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको सभा हललाई प्रदेश सभा वैठकका रुपमा प्रयोग गरिंदैछ । हललाई संसदिय वैठकको ढांचामा तयार गरिएको छ । पहिलो प्रदेशसभा वैठकमा भाग लिन १२ जिल्लाका सांसदहरु बुटवल आएका छन् ।
सभाहलमा सभामुख बस्ने आसन, रोस्टम, सांसदहरु र पत्रकार दिर्घा लगायतको स्थान निश्चित गरी कुर्सीहरु राखिएका छन् । संसद वैठक हलको बाहिरी भवन रंगरोगन गरेर चिटिक्क पारिएको छ । बैठक कक्षमा सत्तापक्ष र विपक्षीका लागि छुट्टाछुट्टै ठाउं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ तर प्रदेश सरकार नबनिसकेकाले हाललाई भने राजनितिक दलका आधारमा तीनवटा लहरमा सांसदहरुलाई राखिने संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।
प्रदेश ५ मा एमालेका ४१, कांग्रेसका १९, माओवादीका २०, संघीय समाजवादी फोरमका ५, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक गरी जम्मा ८७ सांसद छन् ।
के हुन्छ आजको वैठकमा ?
प्रदेशसभाको पहिलो वैठकमा सर्वप्रथम जेष्ठ सदस्य वलदेव शर्मा पोखरेल (अस्थायी सभामुख) ले वैठक प्रारम्भ भएको जानकारी गराउने छन् । वैठकको अध्यक्षता पनि उनैले गर्नेछन् । त्यसपपिछ प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले बैठक आव्ह्वान गरेको पत्र पढेर सुनाउने छन् । त्यस पश्चात ज्ञात अज्ञात शहिदहरुको सम्झनामा १ मिनेट मौन धारण गरिने छ । त्यसपछि सभामुखबाट सम्पुर्ण प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पहिलो बैठकमा स्वागत गर्दै बधाई तथा सुभकामना दिने कार्यक्रम रहने छ । त्यस पश्चात प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरुले पालैपालो रोष्टममा गएर आफ्नो धारण राख्ने छन् । दलका प्रतिनिधिलाई आफ्नो मन्तव्य राख्न १०देखि १५ मिनेट समय निर्धारण गरिएको संसद सचिवालयका सहसचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । त्यसपछि प्रदेश सभा संचालन नियमावली नबनेकाले सभा संचालनका लागि अन्तरिम सभा संचालन कार्यविधि अनुमोदनका लागि संसदमा पेश हुनेछ ।
त्यसैगरि सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक संचालनका लागि ५ सदस्यिय कार्यदल निर्माण गरिने पनि सहसचिव अर्यालले जानकारी दिए । त्यस पश्चात सभामुखको निर्वाचनका लागि माघ २८ गतेका लागि मिति तोकेर अर्को बैठकको आब्ह्वान गर्दै सभामुखले बैठक समापन गर्ने कार्यसुचि तय भएको छ ।
← क्यान्सर पीडितलाई एक लाख सहयोग
एघारौं राष्ट्रिय प्राङगारिक कृषि मेला बुटवलमा, स्टल र दर्शकलाई निःशुल्क →
सिनर्जी नेपालको दोस्रो साधारणसभा